GREEN PARADISE-10 imiz ukusuka kwiziko kunye nendawo yokupaka yasimahla
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguFlavio
Ifumaneka kuphela imizuzu eli-10 ngebhasi/ngemoto ukusuka kumbindi weSixeko kunye neSixeko esidala.
Kwakhona 10 imizuzu ngemoto ukusuka Airport kunye 35 ngebhasi.
I-Supermarket, i-pizzeria, imivalo, i-bakery, i-greengrocer, i-butcher, ibhanki ... zonke kwi-350 yeemitha ukusuka kwindlu!
Ngaphandle kokuba kufutshane nombindi weSixeko, sibonelela:
Indlu yePrimiyamu enezixhobo ngokupheleleyo
/Uxolo, indawo yokusabela kwisiphithiphithi sesiXeko kunye nembonakalo entle yendalo onokuyonwabela emva kosuku oludinisayo
/Unamava okusingatha kunye noncedo
/Indawo yokupaka yasimahla
Indlu yanamhlanje, ekhethekileyo kunye nebanzi ejikelezwe luhlaza kwaye iyilwe ngokhathalelo lweenkcukacha zokuqinisekisa intuthuzelo kunye nemvisiswano.
Ekungeneni ndinikezela ngemathiriyeli ye-turistic, iingcebiso zasekhaya, uhambo oluqhelekileyo kwaye ndiya kuhlala ndikhona ukuze ndiqinisekise ukuba uhlala ungcono!
Igumbi lokulala elinobukhulu be-Super King lilungiselelwe ukudibanisa kunye nohlaza olujikelezileyo; izilayidi, iadaptha yendalo yonke, iMp4 yomculo kunye nesitiriyo ziyanikezelwa! Sinokongeza ibhedi enye xa siceliwe.
Ikhitshi ixhotyiswe ngokupheleleyo: (Umatshini wekhofi / umenzi wekofu wase-Italian, iketile yombane, i-toaster, i-blender, i-juicer, i-cookware esemgangathweni ... ikofu kunye neti zibandakanyiwe).
Igumbi lokuhlambela langoku elinekristale kunye neshawari engaphezulu kwentloko (ishampoo, isithambiso somzimba, isepha, isomisi seenwele kunye neseti yeetawuli zinikezelwa).
Ecaleni kwegumbi lokulala, kwigumbi lokuhlala sinegumbi lokuhlala i-queen size sofa-bed okanye ibhedi enye kwigumbi lokulala esinokuthi siyilungiselele njengesicelo njengendawo yokulala eyongezelelweyo yeendwendwe kunye nebhedi yeentsana / abantwana abancinci esinokuseta. naphi na apho ukhetha!
Ibalcony ivumela isidlo sakusasa sokuphumla okanye i-aperitivs ngokujonga isixeko esingasentla! Kukwakho ne-hammock enye ekhoyo ngamaxesha omileyo :)
IMonterosso yindawo entle kakhulu kwimizuzu embalwa ukusuka kwiziko.
Yindawo yokuhlala eyaziwayo ngobuhle bayo, ukuzola, ngenxa yohlaza oluyijikelezileyo kunye neendlela ezimangalisayo zokuhamba zenduli eziqala apho.
Ngokufuthi iziko leziganeko ezinomdla.
Embindini walo mmelwane (imizuzu emi-3 ngokuhamba) kukho ivenkile enkulu e-1, iimarike ezincinci ezi-2, iibhari ezi-2/iindawo zokutyela, ivenkile yokubhaka, ivenkile, ivenkile yeendaba, ipizzeria, igrocer, ibhula, igastronomy kunye nebhanki eneATM (Intesa- San Paolo).
Ndiya kuhlala ndifumaneka. Zive ukhululekile ukuqhagamshelana nam nangawuphi na umzuzu ngayo nantoni na! Nokuba nje iingcebiso ezongezelelweyo: iingcebiso ezisuka kwindawo yokuhlala zihlala zinexabiso elikhulu.
Inombolo yomthetho: 016024-CIM-00534
Iilwimi: English, Deutsch, Italiano, 日本語, Español